आरुगुला देखि भिटामिन कमी सलाद हटाउन मदत
जंगली मुला हाम्रो कुना मा, डेन्डेलिओन को टाढा नातेदार, म लामो तान्नु छलफल गरिएको छ। तथापि, वैश्वीकरण को युग, हामी सिकेका एक मसालेदार तोरी स्वाद संग पात - भिटामिन को एक वास्तविक गोदाम। यो प्राचीन रोमी द्वारा खपत एक सुरुचिपूर्ण नाम rucola संग तान्नु बाहिर जान्छ, तिनीहरूले जानिन्छ रूपमा, Gourmets थिए। इटाली, यो मध्य युग मा भूल छैन। र अब आरुगुला सलाद मेनु हरेक trattoria मा अनिवार्य पकवान छन्।
मसला को केही पात पकवान फरक ध्वनि बनाउन। यसको juiciness र ओखर तोरी स्वाद पनि सबैभन्दा साधारण सलाद enliven हुनेछ। आरुगुला (फोटो यसलाई देखाउन) व्यञ्जन थप शानदार, उत्कृष्ट, उत्सव बनाउँछ। हिजोको तान्नु र अब उपयोगी बोट, चयापचय normalizes ताकत शुल्क, कोलेस्ट्रल हटाउँदछ र हेमोग्लोबिन को स्तर बढ्छ। तर यो लेप छ र आफ्नै पनि मलम मा उड: रकेट संग व्यञ्जन छैन लामो अवधि लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ। आखिर, यो जडिबुटी चाँडै रस गरौं।
तपाईँलाई आरुगुला को सलाद तयार गर्न सक्नुहुन्छ हेरौं। माछा, मासु, तरकारी, समुद्री भोजन, पनीरों र अन्डा - यो जडिबुटी धेरै उत्पादन राम्रोसँग Blends। त्यसैले, कुनै पनि अवरोध वा यहाँ आफ्नो कल्पना को प्रकटीकरण लागि Taboo। युवा मार (बिरुवाहरु को भन्दा माथि) सारा सलाद, ठूलो पात भताभुङ्ग हातमा फेंक। घाँस को कमी भू-मध्य इन्धन भर्ने मदत गर्नेछ कम - यस भान्सा तिनीहरूलाई, धेरै छन्। यहाँ ती छ। को मिश्रण तेल र balsamic सिरका मसला संग, कटा खोर्सानी र तुलसी थप्नुहोस्। तपाईं झिंगा एक सलाद बनाउन भने, खुली समुद्री त्यहाँ ठाउँ - तिनीहरूको Smells साझेदारी गरौं। एक समय प्रतीक्षा पछि, आरुगुला, आधा चेरी मा कटौती टमाटर crumble। झिंगा सस संग भर्नुहोस्। thinly कटा Parmesan संग Garnish।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, इटालियन जडिबुटी पूर्ण भएको तरकारी संग लिङ्क। र विभिन्न: परम्परागत र विदेशी। रोमान्टिक डिनर लागि आरूगुला राम्रो देखि तरकारी सलाद। अभोकाडो प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् - यो धूर्त पकवान मा aphrodisiacs को प्रतिशत वृद्धि। आरुगुला टियर हात, टमाटर, चेरी टमाटर आधा, अभोकाडो shinkuem स्ट्रिप्स मा कटौती। छुट्टै जार मा जैतून मिश्रण तेल, तोरी, कागति को रस, नुन र मरिच। सक्रिय हल्लाइन्छ, र यो सस पकवान खन्याउन।
कुनै कम स्वादिष्ट, तर कहीं अधिक मासु संग आरुगुला को सलाद सन्तुष्ट छन्। वनस्पति तेल बीफ स्टिक्स मा भुट्नु। मासु छिडकना प्रोभेन्कल जडीबुटी संग, यो गन्ध बनाउन 10 मिनेट को लागि एल्यूमीनियम पन्नी मा र्याप। मासु सुन्दर छ जब, पातलो स्लाइस यसलाई काटे। टुक्रा, आरु र नीलो पनीर गर्न आरुगुला टियर घन मा कटौती। एक पकवान सबै सामाग्री मिश्रण। हामी refills गर्छन्। तोरी को एक चम्मच संग तेल को छ चमचा मिश्रण। यो एक विशेष ऐंसेलु सिरका, जो तथापि, गाढा रक्सी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ आवश्यक छ। ग्यास स्टेशन मा (दुई चमचा) थप्न सलाद खन्याउन।
माछा, विशेष गरी रातो, कुनै पनि पकवान स्वादिष्ट, उत्सव बनाउँछ। आरुगुला र धूम्रपान सामन एक सलाद बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। यो गर्न, नुनीन माछा को 100-150 ग्राम लिन। यो धेरै पातलो स्लाइस मा कटौती हुनुपर्छ। एक ठूलो कचौरा मा, चम्चा तरल मह, तोरी र balsamic सिरका को दुई पटक नम्बर द्वारा मिश्रण। एक वर्दी स्थिरता, तरल चकलेट समान ल्याउनुहोस्। चार चमचा संग ठूलो पतला तेल अतिरिक्त भर्जिन। यस तयार सस मा crumble 125 G आरूगुला। सामन को शीर्ष राख्नु स्लाइस मा। सलाद तयार छ।
कालो जैतून संग अचम्मको सलाद
मुला र अन्डा को सलाद: व्यञ्जनहरु
पोलेको बैगुन को एक सलाद तयार
कसरी अतिथि चकित Olivier गर्न
एक मान्छे कसरी खुसी र उहाँसित चिरस्थायी सम्बन्ध निर्माण गर्न
झण्डै सेतो पुलों (युकान्कोसोकि) - कार्लियाको सुन्दरता रमाइलो लाग्छ
कसरी सुन्दर छालाहरू बनाउने? सुन्दर स्तनको लागि व्यायाम गर्नुहोस्
SSL-जडान त्रुटि, के गर्ने?
फोम ब्लक घरमा को भित्री सजावट: सामाग्री र प्रविधिहरू को छनोट। भित्री सजावट लागि पर्खाल काठको छेकवार
एक संकट के हो? उमेर संकटहरूको। संकट को कारण
Pheromones - हर्मोन, सेक्सी दिन्छ!
Mnemonic स्मृति प्रक्रिया: प्रकार, विकास र विशेषताहरु